Meizu mBlu S6 (M6S) wuxuu marayaa TENAA wuxuuna soo bandhigayaa qaar ka mid ah qeexitaankiisa | Androidsis
Dhawaan, astaamaha qaar ee Meizu mBlu S6 (M6S) waa la xaday, Taleefan si rasmi ah loo soo bandhigi doono 17-ka bisha Janaayo ee sanadkan shirkada.
Taleefankan casriga ah ayaa helay isbarbardhigyo dhowr ah oo la xiriira Xiaomi Redmi 5, Terminal kale oo leh xoogaa sifooyin iyo qeexitaanno xoogaa la mid ah, iyo, tan awgeed, M6S waxaa loo soo bandhigi karaa ikhtiyaar aad isugu eg, laakiin leh qiimo macquul ka raqiisan oo ka jaban.
Sidee baad ku garanaysaa, TENAA waa jaangooyaha iyo caddeynta Shiinaha iyada oo loo marayo dhammaan taleefannada gacanta si loo helo oggolaanshaha rukhsadda suuqgeynta ee waddankaas.
Meizu mBlu S6, sida laga soo xigtay TENAA, wuxuu leeyahay shaashad HD 5.7-inji ah oo leh 1440 x 720 pixels xal leh 18: 9 qaab muuqaal ah.
Isla markiiba, Qalabkani wuxuu leeyahay Samsung Exynos 7872 processor-ka lix-xudunta ah (4x A53 + 2x A73), oo uu weheliyo processor-ka loo yaqaan 'Mali-G71'. Waxay sidoo kale la socotaa 3GB RAM, 32GB oo ah xusuusta gudaha, iyo batari 3.000mAh ah oo leh taageero 9V / 2A 18W oo si dhakhso ah u buuxinaysa.
Sida naqshadeeda, sida aan ku arki karno sawirka, dhabarka waxay kaliya ku dhexjirtaa kamarad leh Flash Flash, oo ay la socdaan astaanta mBlu ee ka hooseysa iyo, ka hooseysa, astaanta Meizu.
Dhinaca hore, waxay leedahay kamarad labaad oo sawirro iska qaad ah oo ku xigta geeska wicitaannada iyo dareemayaal, marka lagu daro shaashadda, dabcan, taas oo, sidaan horay u soo sheegnayba, ay ku jirto qaab 18: 9 ah.
Dhinaca bidix, M6S waxay leedahay badhamada mugga iyo, midigta, akhristaha sawirka faraha ee ka hooseeya badhanka on / off.
1 Meizu M6S sidoo kale waxaa lagu arkay AnTuTu
2 Qiimaha iyo helitaanka Meizu mBlu S6
Meizu M6S sidoo kale waxaa lagu arkay AnTuTu
Meizu M6S sidoo kale wuxuu ka muuqdaa AnTuTu
Sida laga soo xigtay AnTuTu, macquul ahaan waa bartilmaameedka ugu caansan adduunka Android, moobaylkani wuxuu la yimaadaa Android 7.0 Nougat sida aan ku arki karno sawirka.
Qiimaha iyo helitaanka Meizu mBlu S6
Marka laga hadlayo qiimaha uu taleefankan casriga ahi yeelan karo, waxaa jira hadalheyn ku saabsan 1000 yuan, oo ku saabsanaa 128 euro in la beddelo ama qiyaastii 154 doolar qiyaastii.
Qalabkan waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa bishaan Janaayo 17deeda oo ay weheliso dhammaan qeexitaankiisa iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Meizu mBlu S6 (M6S) wuxuu marayaa TENAA wuxuuna soo bandhigayaa qaar ka mid ah qeexitaankiisa